Gudoomiyaha la-dagalanka Qaadka Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay magalada Buuhoodle [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Gudoomiyaha la-dagalanka Qaadka Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay magalada Buuhoodle [Sawirro]
gudoomiyaha la-dagalanka Qaadka Soomaliya Abuukar Cawaale
Wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha la-dagalanka Qaadka Soomaliya Abuukar Cawaale oo uu qayb ka yahay Gudoomiyaha Gobalka Mudug Maxamed Yuusuf Tigey ayaa galinkii danbe ee maanta lagu soo dhaweeyay magalada Buuhoodle ee xarunta Gobalka Cayn.
Soo dhawaynta wafdigan waxaa ka qayb galay mamulka Gobalka Cayn,Odayaasha dhaqanka Buuhoodle iyo ardayda Jaamacadda Bariga Africa, kuwaasoo kaga hortagay qiyaastii meel u jirta magalada 10-KM, waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin inuu Gobalka soo gaaro wacyi galinta joojinta Qaadka Soomaaliya uga yimaada dalalka Kenya iyo Itoobiya.
Gudoomiyaha Gobalka Cayn Maxamed Xasan Faarax oo ugu horayntii warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay dadka in laga wacyi galiyo waxyaabaha dhibka ku haya oo ay ka mid tahay maandooriyaha Qaadka, masuulkani ayaa sheegay inuu garab istaagayo Olalahan uu wado Abuukar Cawaale.
Caaqil Cabdisamad Cali Xasan, Caaqil Cabdilaahi Xasan iyo Nabadoon Ibraahim Cali Shirre oo ka mid ah Odayaasha dhaqanka Buuhoodle ayaa dhankooda sheegay inay dowr ka qaadan doonaan Olalaha la-dagalanka Qaadka, waxay sheegeen inuu soo gaaray wacyi galintan waqti loo baahnaa.
Abuukar Cawaale Qaaddiid oo Puntland ka wada wacyi galinta joojinta Qaadka ayaa hadal uu jeediyay ku sheegay inuu ku faraxsan yahay soo gaaristiisa Gobalka Cayn gaar ahaan magalada Buuhoodle, waxa uu Cawaale sheegay inuu ku hanwayn yahay shacabka Gobalka Cayn inay gaarto wacyi galintan oo muhiim u ah qof kasta oo SOomaali ah inay gaarto.
Inta uu jooga Gudoomiyaha la-dagalanka Qaadka magalada Buuhoodle waxa uu booqan doonaa xarumaha waxbarashada, si loo gaarsiiyo barnaamijkan,waana markii ugu horaysay gobalka ay wacyi galintan soo gaarto.
Olalaha la-dagalanka Qaadka Soomaaliya,